Ònye Bụ Onyeisi Ndịàmà Jehova? | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
“Chụlaanụ Ndị Isi Ha”
N’abalị iri na atọ n’ọnwa Julaị, afọ 1957, otu onye uwe ojii aha ya bụ Colón, degaara otu onyeisi na gọọmenti akwụkwọ. O dere, sị: “Ndị obodo anyị na-atụ ilu, sị, ‘Ị chọọ igbu agwọ, gbupụ ya isi.’ Ihe anyị ga-eme ma anyị chọọ imechi Àmà Jehova n’obodo anyị a bụ ịchụla ndị ozi ala ọzọ ha. Nke a ga-eme ka ha ghara inwe ndị isi. Ma ha enweghị ndị isi, nke ha na-eme agwụla.”
Obere oge Maazị Colón dechara akwụkwọ ozi ahụ, otu nwoke ọzọ nọ n’ọkwá ukwu na gọọmenti aha ya bụ Arturo Espaillat nyere ndị ozi ala ọzọ iri ka nọ n’obodo ha iwu ka ha laa. N’abalị iri abụọ na otu n’ọnwa Julaị, afọ 1957, Nwanna Roy Brandt degaara Trujillo akwụkwọ ka ya na ya hụ ka o nwee ike kọwaara ya ihe mere na Ndịàmà Jehova anaghị eme ihe ụfọdụ ndị ọzọ na-eme. Ihe ụfọdụ o dere n’akwụkwọ ozi ahụ bụ, “Asị ụfọdụ ndị obodo a kpọrọ Jehova Chineke bụ ụdị asị ndị e duhiere n’oge ochie kpọrọ ndịozi Jizọs.” Nwanna Brandt gwaziri Trujillo ka ọ gụọ Ọrụ Ndịozi isi abụọ ruo isi isii. Ọ gwakwara ya na ‘ihe ọkàikpe aha ya bụ Gameliel gwara ndị Sanhedrin bara uru taa otú ọ bara n’oge ahụ.’ Nwanna Brandt ji mkpụrụ akwụkwọ okpotokpo deere ya ihe ụfọdụ dị n’Ọrụ Ndịozi 5:38, 39. Ọ sịrị: “HAPỤNỤ HA; N’IHI NA, Ọ BỤRỤ NA ỌRỤ A HA NA-ARỤ SI N’AKA CHINEKE, UNU GA-EMECHA CHỌPỤTA OTU ỤBỌCHỊ NA UNU LỤSORO CHINEKE ỌGỤ.” Ma, akwụkwọ ozi a emeghị ka ọ gbanwee obi ya. N’abalị atọ n’ọnwa Ọgọst, afọ 1957, e buuru ndị ozi ala ọzọ anyị gaa n’ọdụ ụgbọelu, bulaa.
‘Jizọs Bụ Onyeisi’
Onye a bụ Nwanna Donald Nowills. N’oge ọ dị afọ iri abụọ, a họpụtara ya ka ọ na-elekọta alaka ụlọ ọrụ anyị
Oleezi ihe ụmụnna anyị ga-eme ugbu a ndị ozi ala ọzọ niile lara? Hà ga-anọnụ n’enweghị ‘onyeisi,’ otú ahụ Colón kwuru? Mbanụ. Ọ bụ Jizọs bụ “isi nke ahụ́ ahụ, ya bụ, ọgbakọ ya.” (Kọl. 1:18) N’ihi ya, Ndịàmà Jehova nọ na Dọminikan Ripọblik nwere ‘onyeisi.’ Jehova na nzukọ ya ka na-elekọta ha.
Mgbe ndị ozi ala ọzọ ahụ lara, a họpụtara Nwanna Donald Nowills ka ọ na-elekọta alaka ụlọ ọrụ anyị. Ọ dị afọ iri abụọ mgbe ahụ. Ihe a ka bụ naanị afọ anọ e mere ya baptizim. Ọ bụ eziokwu na ọ rụọla ọrụ onye nlekọta sekit ọnwa ole na ole, ọ rụtụbeghị ọrụ n’alaka ụlọ ọrụ. Nwanna Nowills nwere obere ọfis n’ụlọ ya. E ji osisi rụọ ya, jirikwa gbamgbam kụọ elu ya. E teghịkwa ala ya simenti. Ọ dị na Gụali, bụ́ ebe a na-eze eze na Kiudad Trujilo. Ya na Nwanna Félix Marte na-emepụtaghachiri ụmụnna nọ na Dọminikan Ripọblik Ụlọ Nche ha na-agụ.
Ihe a bụ Ụlọ Nche e ji ígwè kọpị kọpị mepụtaghachi n’afọ 1958
Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Mary Glass nyeere Nwanna Nowills aka n’ọrụ ya. N’oge ahụ, a tụrụ di ya mkpọrọ. O kwuru, sị: “Ọ na-abụ m mechie ọrụ n’elekere ise, mụ agaa n’ọfis Nwanna Nowills jiri ígwè taịpraịta na-ede Ụlọ Nche. M dechaa, Nwanna Nowills ejiri ígwè kọpị kọpị mepụta ya ọtụtụ. Anyị mechaa, otu nwanna nwaanyị na-esi Santiago bịa tinye Ụlọ Nche ndị ahụ n’ala ala tin mmanụ. Ihe anyị na-akpọ nwanna nwaanyị a bụ ‘mmụọ ozi.’ O tinyechaa Ụlọ Nche na tin, ya asachie ya ákwà, were akpụ na poteto ma ọ bụ ihe ọzọ tinyejuo n’elu ya. Ọ na-ejizi akpa sachie elu ya. O mechaa, ya eburu ya banye ụgbọala gaa n’ebe ugwu obodo ahụ nye ọgbakọ ndị e nwere ebe ahụ otu otu. Ọgbakọ nweta nke ha, ha enye ya otu ezinụlọ ka ha gụọ. Ha gụchaa, ha enye ya ezinụlọ ọzọ. Otú ahụ ka ha na-eme ya ruo mgbe ezinụlọ ọ bụla gụchara ya.”
Nwanna Nwaanyị Mary kwukwara, sị: “Anyị na-akpachapụ anya n’ihi na ndị ọrụ gọọmenti na-agagharị, na-achọ ebe a na-emepụta Ụlọ Nche ndị ahụ. Mana ha achọtalighị ya. Jehova chebere anyị n’oge niile ahụ.”
mailto:?body=Ònye Bụ Onyeisi?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302015011%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ònye Bụ Onyeisi?